Yuusuf Indha Cadde oo lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay Dagaal dad badan ku dhinteen iyo Indha Cadde oo Jawaab ka bixiyay eedeyntaasi Waxaa Shalay Deegaanka no-50 ee Gobolka Shabeelaha Hoose ka dhacay Dagaal dhiig badan ku daateen oo u dhaxeeyay Ciidamo katirsan Milatariga Soomaaliya iyo ciidamo kale oo iyana ka tirsan Maamulka Deegaanka No-50 oo Dowlada Hoos taga. Gudoomiyaha Deegaanka No-50 Cabdulaahi Waafow oo la hadlay Warbaahinta ayaa dagaalkii shalay ku eedeeyay Ciidamo katirsan Milatariga Soomaaliya oo aad u hubeesnaa kusoo qaadeen Deegaankaasi halkaasna ay ka geesteen xasuuq iyo Boob. Waafow ayaa xusay in Ciidamada soo weeraray ay yihiin Ciidamo ka amar qaata Sheekh Yuusuf Indha Cadde ayna Hogaaminayeen Jen.Goobaale iyo Janaraale Qaafow waxa uuna Dagaalkii shalay Gudoomiyaha Deegaanka No-50 ku saleeyay mid qabiil. Jen Yuusuf Maxamed Siyaad Indha Cadde oo isna la hadlay Warbaahinta Mqdisho ayaa beeniyay in dagaalka uu ku lug lahaa waxa uuna taa badalkeeda sheegay in Dagaalkii shalay uu u dhaxeeyay Ciidamo katirsan Milatariga iyo Ciidamo taabacsan Al- Shabaab oo kusugnaa Deegaanka No.5o. Indha Cadde waxa uu ku eedeeyay Maleeshiyada dagaalka la gashay Ciidamada Milatariga in ay yihiin kuwa Shabaab hoosta ku wata dadkana dhibaato ku hayay waxa uuna cadeeyay in Dowlada Soomaaliya ay ogtahay isna ogyahay in dagaalyahano Shabaab ah ay joogaan No-50. Marka laga soo tago eedeynta labada dhinac isku jeediyeen ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Dowlada Soomaaliya oo ku aadan Dagaalkii dhiiga badan ku daatay ee maalintii shalay ka dhacay Deegaanka No-50. Xafiiska Shabakada – IFTIINI SOMALIA
Yuusuf Indha Cadde oo
lagu eedeeyay in uu ka
dambeeyay Dagaal dad
badan ku dhinteen iyo
Indha Cadde oo Jawaab ka
Waxaa Shalay Deegaanka
no-50 ee Gobolka
Shabeelaha Hoose ka dhacay
Dagaal dhiig badan ku
daateen oo u dhaxeeyay
Ciidamo katirsan Milatariga
Soomaaliya iyo ciidamo kale
oo iyana ka tirsan Maamulka
Deegaanka No-50 oo
Dowlada Hoos taga.
No-50 Cabdulaahi Waafow
oo la hadlay Warbaahinta
ayaa dagaalkii shalay ku
eedeeyay Ciidamo katirsan
Milatariga Soomaaliya oo
aad u hubeesnaa kusoo
halkaasna ay ka geesteen
xasuuq iyo Boob.
Waafow ayaa xusay in
Ciidamada soo weeraray ay
yihiin Ciidamo ka amar
qaata Sheekh Yuusuf Indha
Cadde ayna Hogaaminayeen
Jen.Goobaale iyo Janaraale
Qaafow waxa uuna Dagaalkii
Deegaanka No-50 ku
saleeyay mid qabiil.
Jen Yuusuf Maxamed Siyaad
Indha Cadde oo isna la
Mqdisho ayaa beeniyay in
dagaalka uu ku lug lahaa
waxa uuna taa badalkeeda
sheegay in Dagaalkii shalay
uu u dhaxeeyay Ciidamo
katirsan Milatariga iyo
Ciidamo taabacsan Al-
Shabaab oo kusugnaa
Indha Cadde waxa uu ku
dagaalka la gashay
Ciidamada Milatariga in ay
yihiin kuwa Shabaab hoosta
ku wata dadkana dhibaato
ku hayay waxa uuna
cadeeyay in Dowlada
Soomaaliya ay ogtahay isna
ogyahay in dagaalyahano
Shabaab ah ay joogaan
Marka laga soo tago
eedeynta labada dhinac isku
jeediyeen ma jiro wax war
ah oo kasoo baxay Dowlada
Soomaaliya oo ku aadan
Dagaalkii dhiiga badan ku
daatay ee maalintii shalay
ka dhacay Deegaanka No-50.
Xafiiska Shabakada source allbanaadir.com